Erzurum Büyükşehir'den Ulaşım Seferberliği | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး25 ErzurumErzurum Metropolitan မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, ကတ္တရာသတင်းများ, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
မြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များအပြင်အရည်အသွေးရှိသောလမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောခရိုင်များနှင့်ကျေးရွာများဖြစ်သော Erzurum Metropolitan Municipality ။
Uzunahmet အုပ်စုလမ်းကိုဖုံးကွယ်ထားသော Uzunahmet၊ Nebihanlar, Pusu Deresi, Sığırlıနှင့်Şehit Burak Karakoçပတ် ၀ န်းကျင်များအပြင် 19 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်တွင်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဒီဇိုင်းဆင်ထားသည်။ 36 တထောင် 712 ကတ္တရာတန်ချိန်နှင့် 53 ထောင်ပေါင်း 637 တန်ချိန်မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အ ဦ များသို့အုပ်စုတွင်အသုံးပြုသော PMN ကတ္တရာတန်ချိန် ထပ်မံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုကန့်သတ်ချက်မရှိကြောင်းထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Mehmet Sekmen၊ Erzurum, Erzurum အပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီး၊ "ကျွန်ုပ်၏kadirşinasနိုင်ငံသားများသည်အကောင်းဆုံးအရာများရထိုက်" ဟုသူကပြောသည်။
မြို့တော်ဝန် Sekmen မှမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်မြို့အနှံ့အပြားရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များကိုအာရုံစိုက်ပြီး“ မြို့သစ်သို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ၊ Boulevards၊ Viaducts နှင့်လမ်းဆုံများတည်ဆောက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်ကျေးရွာများကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့ပါ။ စုစုပေါင်းအရှည်ကီလိုမီတာရှည်သော5ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာကိုဆက်သွယ်ပေးသော Uzunahmet Group Road ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဤဒေသရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကြီးမားစွာကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။
သမ္မတ TABMEN မှကွန်ရက်သို့သယ်ယူရန်လာသည်
လမ်းအုပ်စုများ၏တိုးတက်မှုနှင့်ပြန်လည်စီစဉ်မှုအတိုင်းအတာအရ 36၊ 712 ကတ္တရာတန်ချိန်နှင့် 53 ထောင်ပေါင်းများစွာသော Plentmiks ဟုခေါ်သည့်အပေါ်ယံအဖုံးများအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်သည်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များမှာတိုးများလာနေသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောနေရာများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်အသစ်များကိုဖန်တီးကြသည်။ အချို့ဒေသများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းများကိုပြန်လည် ပြင်ဆင်၍ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ မြို့တော်မြူနီစီပယ်အဖြစ်, ကျွန်ုပ်တို့သည် Erzurum ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုတိုးတက်အောင်နှင့်ခိုင်မာအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကိုသွားလာရလွယ်ကူသောမြို့ပြအမှတ်အသားနှင့်အတူပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်
အဆိုပါမသန်စွမ်း Inc ကိုများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Kayseri Barrier-အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလပ်ြရြား 14 / 05 / 2018 Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. နှင့် Anadolu မသန်စွမ်းသူများအသင်းမှ Elsiz Barrier-Free Transport Project dolayısıylaကိုမသန်စွမ်းသူများအတွက်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Kayseri Transportation Inc မှ ၀ န်ထမ်းများသည်မသန်စွမ်းသောနိုင်ငံသားများနှင့်အတူရထားလမ်းစနစ်များဖြင့်ခရီးသွားလာခဲ့ကြသည်။ Project မှ ...
အဆိုပါမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်၏စည်းရုံးခြင်း 26 / 09 / 2019 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaştı. PTT ile Emniyet Müdürlüğü bağlantısını sağlayan yoldan İsmetpaşa Caddesi ve Palandöken Devlet Hastanesi bağlantı yollarına varıncaya kadar merkezde…
လာသောအခါအသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုပိုမိုအဆိုပါမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ Erzurum စိတ်သက်သာရာရ 01 / 08 / 2018 Erzurum မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ .ükrüpaşaနှင့် 50 ။ ယီရိပ်သာလမ်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချရန်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်, 50 ။ Yılလမ်း၊ Şükrüpaşaနှင့်Dadaşköyလမ်း yeni တို့တွင်အသစ်ဖြစ်သည်
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကတ္တရာလပ်ြရြား 24 / 05 / 2014 Mersin Metropolitan Municipality မှကတ္တရာစည်းရုံးခြင်း - Mersin Metropolitan Municipality မှKargıpınarı Neighborhood မှာကတ္တရာတန်ချိန် 700 ကိုသွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ Mersin Metropolitan မြို့တော်ဝန် Burhanettin Kocamaz ကပြောကြားရာတွင်ကတ္တရာလုပ်ငန်းကိုပြည်နယ်တစ်လျှောက်တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်…
အဆိုပါမြို့တော်ယာဉ်အသွားအလာပညာရေးမှသည် Erzurum 16 / 04 / 2018 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocuklara trafik eğitimi veriyor. Olimpiyat Parkı’nda özel olarak kurulan trafik eğitim pistinde, araç ve yaya güvenliği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, ulaşım ve trafik ışıkları hakkında da…
အဆိုပါမသန်စွမ်း Inc ကိုများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Kayseri Barrier-အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလပ်ြရြား
လာသောအခါအသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုပိုမိုအဆိုပါမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ Erzurum စိတ်သက်သာရာရ
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကတ္တရာလပ်ြရြား
Erzurum မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမြို့ပြပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုစီမံကိန်းအကြံပေးတင်ဒါ pre-ရွေးကောက်ပွဲကိုမေလ 07 2012 ၏လျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးနေ့စွဲ
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဇွန်လတွင် 04 2012 ရက်ပေါင်းဖွင့်လှစ်အတိုင်ပင်ခံကန်ထရိုက်၏မြို့ပြပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးစာအိတ်